Ukuphupha ngeTafile Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Xa utolika uphawu "lwebhodi" olusephupheni, kubalulekile ukuba kuqala ucacise ukuba loluphi uhlobo lwebhodi olwabonwa ephupheni. Kuba ngasemva kwegama elithi "ibhodi emnyama" izinto ezininzi zinokufihlwa:
Kwelinye icala, inokuqondwa njengencwadana yokubhala okanye ibhodi emnyama esikolweni. Kwelinye icala, igama elithi "itafile" likwasetyenziselwa ukuchaza itheyibhile ende, njengemihla yeembasa.
Ke yeyiphi ipaneli ebonwe ephupheni kwaye kufuneka itolikwe?
1 Uphawu lwephupha «ibhodi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ibhodi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ibhodi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ibhodi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ibhodi yesikolo ibonwa njengophawu lokuphupha ngaphakathi kokuchazwa kwephupha ngokubanzi, eli phupha linenye isicelo ukufunda ukuphupha ngamava abo. Akufanele ungabahoyi, kodwa sebenzisa ulwazi lwabo ebomini bakho.
Ngamanye amaxesha ibhodi yesikolo okanye ibhodi yokuzoba nayo inako ngokwephupha lephupha. Iirati kwaye uncede ukubonisa. Ukucoca itafile ephupheni kulindeleke ukuba kubonise iphupha ekufuneka uthethile ngalo kwizicwangciso zakho zobomi bokuvuka kunye nethemba. Ngelishwa, ezi azizukunikwa mbeko. Ukuba oonobumba, amagama okanye iifomula zezibalo kunye neenombolo kwibhodi yamaphupha zinokwaziwa ngokucacileyo ephupheni, ezi kufuneka zichazwe ngoncedo lweempawu zamaphupha ahambelanayo.
Isimboli yephupha "ibhodi emnyama" ngokwencwadana yokubhala itolika ukutolikwa ngokubanzi kwephupha njengophawu lokuba uya kuvuka kungekudala el mundo yomlindo. ekufundeni kufuneka uhlawule. Ixesha elininzi, le meko yamaphupha ibonisa amatyala ekufuneka ehlawulwe kungekudala.
Ibhodi engenanto ephupheni imele enye umyalezo kwihlabathi elivukayo, apho abaphuphi kufuneka banikele ingqalelo.
Itheyibhile efunyaniswe njengetafile ephupheni igqalwa njengelikhumbuza iphupha leziganeko ezothusayo. Ukuba, kwelinye icala, itafile isetiwe ephupheni, iphupha elo linokucinga kwangoko elinye kwihlabathi elivukayo. isimemo ndijonge phambili.
Ukuba kukho izitya ezininzi kwitafile yamaphupha, zininzi izinto ezonwabisayo ezizayo. Itafile ende, oko kukuthi, itafile ende, enabantu abahlekisayo njengophawu lwephupha, ibonisa iphupha oza kuthi kungekudala ube nexesha elimyoli.
Uphawu lwephupha «ibhodi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, itafile ebekiweyo ifanekisela intlanganiso engakhathaliyo, uphawu lwephupha. imeko yosapho kunye nemvakalelo yosapho ebuntwaneni.
Ukuba iphupha elo libhala ebhodini yesikolo ephupheni lakho kwaye lijongwa ngutitshala kunye nabo ufunda nabo, kuya kufuneka uqonde, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, ukuba sowulifumene. bug endala phinda. Ke ngoko, kuya kufuneka ujonge ngononophelo kwinto oyenzayo kwihlabathi elivukayo kwaye ke ugqibe ngobubi bakho.
Ukucoca ibhodi ebhodini esikolweni ephupheni kufuna ukubonisa ukuba iphupha lifuna ukucima ixesha elidlulileyo kwimemori yalo.
Ukuba umsebenzi uvela kwibhodi yokubhala ephupheni, iphupha liya kuba lelakho Umsebenzi wobomi Uyazi. Ngale phupha, i-subconscious yakho ifuna ukukwazisa ukuba uxhotyiswe ngokufanelekileyo kwimisebenzi yobomi, kodwa kuphela ukuba ungawusombulula kakuhle umsebenzi wephupha.
Ukuba iphupha alinakho ukusombulula umsebenzi ebhodini ephupheni lakho, awukaziboni iingxaki zakho ekuvukeni kobomi okanye awukasifumani isisombululo kuzo. Ke kuya kufuneka usebenze ngokwakho.
Uphawu lwephupha «ibhodi» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kutolika uphawu lwephupha "ibhodi emnyama" ngengqondo yebhodi yesikolo njengomboniso wephupha ulwazi lokomoya Kuya kufuneka wandise kwaye ufunde izinto ezintsha.
Itafile ebekwe njengetafile ephupheni, nangona kunjalo, ifanekisela imithetho yokomoya.